Sehatra ho an’ny tanora :: Handray an’i Andriaina sy ny tarika Tooln ny “Lampihazo” • AoRaha
Sehatra ho an’ny tanora Handray an’i Andriaina sy ny tarika Tooln ny “Lampihazo”
Hetsika fanao isam-bolana, ao amin’ny Institut Français de Madagascar (IFM) Analakely, natokana ho an’ireo tanora manan-talenta nefa vao misandratra ny “Lampihazo”. Hanome sehatra an’i Andriaina sy ny tarika Tooln Edutainment ny Lampihazo, amin’ny sabotsy 7 septambra 2019, ao anatin’ny andiany fahafito.
Tanora manan-talenta amin’ny fihirana sy fitendrena gitara i Andriaina Rakotonirina. Teo amin’ny fahaenina taonany no nanomboka nilofo tao anatin’ny mozika ny tovolahy. Mifototra amin’ny gadon-kira “soul” ny kanto ataony. Nianatra sy nanao fikarohana ara-javakanto samihafa izy, ka nanitatra ny talentany tamina sehatra hafa. Manana hira maro sady mahaliana ny sofina i Andriaina.
Vondrona tanora mpiangaly ny mozika “rap” ny Tooln. Efatra mirahalahy izy ireo no mandrafitra an’ity tarika ity, ahitana an’i Gaskarya, Thony Rakz, Cris Kayst ary i Sakay. Maneho ny zava-misy eny amin’ny fiarahamonina sy ny fiainana andavanandro ny ankamaroan’ny hiran-dry Tooln. Mitolona ho amin’ny fampanjakana ny fijery miabo sy famelomana ny fanantenana any an-tsain’ny olona ihany koa ry zareo. Mivelatra amina karazan-kira hafa ny Tooln, raha tsy hitanisa afa-tsy ny “reggae” sy “dancehall”.
Tsiahivina hatrany fa zava-baovao natolotry ny IFM tamin’ity taona ity ny “Lampihazo”. Fihaonana natao isam-bolana mba ho sehatra hanehoan’ireo tanora manan-talenta amin’ny lafin-java-kanto maro fanao eny an-tsehatra, toy ny hira, dihy, tantara an-tsehatra sy ny maro hafa.
Lalao ho an’ny ankizy
Lalao afrikana any Maraoka :: Aotra ny vokatra medaly ho an’ny delegasiona Malagasy